Waxyaabo dad badan caado ka dhigtay oo dhib ku ah caafimaadka qofka oo aan loo baahneyn… – Hagaag.com
Posted on 17 Janaayo 2021 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Waqtiga oo nagu yar awgeed, iyo si aanan uga daahin shaqada, Caadi ahaan waxaan quraacda ku cabnaa koob shaahi ah kadibna dhaqso ayaan u qubeysannaa. Laakiin caadooyinka noocan oo kale ah waa in dib looga fiirsadaa, maadaama ay jiraan caadooyin kale oo kuu horseedi kara dhibaatooyin caafimaad, sida laab xanuun ama gubashada caloosha iyo daal.
4 waxyaabood oo aan la sameyn karin cunista ka dib:
Waxaa xusid mudan in heer-kulka jidhka bini-aadamku waxyar kor u kaco inta lagu jiro mayrashada, sidaa darteed jidhku wuxuu u baahan yahay inuu dhiig badan ku shubo maqaarka, Taasi waxay hoos u dhigeysaa habka dheef-shiidka. Sidaa darteed, waxaa fiican inaad qubeysato 30 daqiiqo ka dib cunista.
2- Cabida shaah
Dad badan ayaa caadeystay inay cabaan koob shaah ah waqtiga khadada, laakiin cilmi baaris ayaa muujisay in cabitaankan aan waxyeellada lahayn uu ka hortagayo nuugista birta, kaasi oo muhiim u ah caafimaadka, isla markaasina muhim u ah dadka dhiig yarida qaba.
Sidaa darteed, khubaradu waxay kula talinayaan dadka qaba dhiig yarida, sida carruurta iyo haweenka uurka leh inay cabbaan shaaha ugu yaraan saacad kadib marka ay wax cunaan.
Daraasadaha qaarkood waxay caddeeyeen in caadooyinka baahsan ay tilmaamayaan in hurdada cunista kadib ay kordhin karto miisaanka, taasi ma ahan mid sal cilmi ah leh, sidaa darteed ma dafiri karno dhibaatada uu keenay dhaqankani, U seexashada caloosha ka dib cunista wuxuu qofku kala kulmi karaa hurdo aan raaxo lahayn iyadoo u horseedeysa laabjeex.
Khabaradu waxay isku raaceen inay haboon tahay in la seexdo ugu yaraan laba saacadood ka dib cuntada.
4- Ciyaaro isborti oo la sameeyo
Khabaradu kuma talinayaan jimicsi isla marka aad wax cuntid, iyadoon loo eegin sida soo jiidashada leh ee fikradani ugu muuqan karto dad badan. Jimicsiga caloosha oo buuxda wuxuu sababi karaa raaxo-darro sida xiiq-da iyo lallabbo, iyo sidoo kale cawaaqib xumo ka sii daran sida dhaawacyo iyo casiraad ama majuujin.
Hadaadan awoodin inaad ka maaranto jimicsi cuntada kadib, waxaad ku soo koobi kartaa inaad si tartiib ah u socoto, halka aadan sameyn karin inta ka hartay noocyada jimicsiga illaa ugu yaraan laba saacadood ay ka soo wareegto cunista kadib.